Intel Core CPU 8th Generation နဲ့ SSD 1TB အပါအဝင် အဆင့်မြင့် Dell XPS 13 Laptop - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Dell Laptop Tech News Intel Core CPU 8th Generation နဲ့ SSD 1TB အပါအဝင် အဆင့်မြင့် Dell XPS 13 Laptop
Intel Core CPU 8th Generation နဲ့ SSD 1TB အပါအဝင် အဆင့်မြင့် Dell XPS 13 Laptop
Maung Pauk at 12:47:00 PM Dell, Laptop, Tech News,
နည်းပညာသတင်းတွေနဲ့ Software တွေကို တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ မောင်ပေါက်
Dell ဟာ 2018 မှာ ပထမဆုံးနဲ့ အဆင့်မြင့်မြင့်အသုံးပြုလို့ရနိုင်မယ့် Dell XPS 13 ကို 999.99 ဒေါ်လာ နဲ့ ဈေးကွက်တင်လိုက်ပါတယ်...
Dell XPS 13 ဟာ ခေတ်စနစ်နဲ့ကိုက်ညီနဲ့ 13 လက်မ မှန်ပြင်အရွယ်အစားကို ဘောင်မဲ့နည်းပညာ bezel-less နဲ့ ထုတ်လုပ်လာတာဖြစ်ပြီး အလွန်ပါးလွှာတဲ့ Ultra Thin နဲ့ အဆင့်မြင့်မြင့် ပွဲထွက်လာပါတယ်.. CPU အနေနဲ့ Intel ရဲ့ 8th Generation Core i Series ကိုထည့်သွင်းထုတ်လုပ်ထားပါတယ်.. CPU တွေကတော့ Core i5-8250U နဲ့ Core i7-8550U တို့ကိုသုံးထားပြီး ဘက်ထရီစားသက်သာပြီး အပူစီးကူးမှုနည်းနိုင်သမျ နည်းအောင် ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်.. 4K Display စနစ်က ခုခေတ်ပေါ် 4K Resolution Video တွေရဲ့ အရသာကို ကောင်းကောင်းခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..
Storage အတွက် 1TB SSD ကိုထည့်သွင်းပေးထားပြီး RAM ကို အနည်းဆုံး 4GB ကနေ 8GB ထိ တပ်ဆင်ပေးထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်..
Bluetooth 5th gen နဲ့ မြန်ဆန်သွက်လက်တဲ့ Wifi, USB Type A to Type C Adapter တို့လည်း ပါဝင်ပါမယ်.. စုစုပေါင်း အလေးချိန် 1.22 Kg သာ လေးတာမို့ ပေါ့ပါးပြီး သယ်ဆောင်ရတာလည်း လွယ်ကူပါမယ်..
Windows 10 64bit ကို Official အနေနဲ့ Install လုပ်ပေးထားပြီး မျက်နှာဖတ်ပြီး UnLock ဖြည်တဲ့စနစ် နဲ့ လက်ဗွေနဲ့ Unlock စနစ်လည်းပါဝင်လာပါမယ်.. Windows OS သုံးထားတဲ့ Dell XPS 13 ကို 999.99 ဒေါ်လာနဲ့ Linux Ubuntu သုံးထားတဲ့ Dell XPS 13 ကတော့ 949.99 ဒေါ်လာ ကျသင့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်..
Dell ဟာ 2018 မှာ ပထမဆုံးနဲ့ အဆငျ့မွငျ့မွငျ့အသုံးပွုလို့ရနိုငျမယျ့ Dell XPS 13 ကို 999.99 ဒျေါလာ နဲ့ စြေးကှကျတငျလိုကျပါတယျ...
Dell XPS 13 ဟာ ခတျေစနဈနဲ့ကိုကျညီနဲ့ 13 လကျမ မှနျပွငျအရှယျအစားကို ဘောငျမဲ့နညျးပညာ bezel-less နဲ့ ထုတျလုပျလာတာဖွဈပွီး အလှနျပါးလှာတဲ့ Ultra Thin နဲ့ အဆငျ့မွငျ့မွငျ့ ပှဲထှကျလာပါတယျ.. CPU အနနေဲ့ Intel ရဲ့ 8th Generation Core i Series ကိုထညျ့သှငျးထုတျလုပျထားပါတယျ.. CPU တှကေတော့ Core i5-8250U နဲ့ Core i7-8550U တို့ကိုသုံးထားပွီး ဘကျထရီစားသကျသာပွီး အပူစီးကူးမှုနညျးနိုငျသမြ နညျးအောငျ ဆောငျရှကျထားပါတယျ.. 4K Display စနဈက ခုခတျေပျေါ 4K Resolution Video တှရေဲ့ အရသာကို ကောငျးကောငျးခံစားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ.. Storage အတှကျ 1TB SSD ကိုထညျ့သှငျးပေးထားပွီး RAM ကို အနညျးဆုံး 4GB ကနေ 8GB ထိ တပျဆငျပေးထားမယျလို့ဆိုပါတယျ..
Bluetooth 5th gen နဲ့ မွနျဆနျသှကျလကျတဲ့ Wifi, USB Type A to Type C Adapter တို့လညျး ပါဝငျပါမယျ.. စုစုပေါငျး အလေးခြိနျ 1.22 Kg သာ လေးတာမို့ ပေါ့ပါးပွီး သယျဆောငျရတာလညျး လှယျကူပါမယျ..
Windows 10 64bit ကို Official အနနေဲ့ Install လုပျပေးထားပွီး မကျြနှာဖတျပွီး UnLock ဖွညျတဲ့စနဈ နဲ့ လကျဗှနေဲ့ Unlock စနဈလညျးပါဝငျလာပါမယျ.. Windows OS သုံးထားတဲ့ Dell XPS 13 ကို 999.99 ဒျေါလာနဲ့ Linux Ubuntu သုံးထားတဲ့ Dell XPS 13 ကတော့ 949.99 ဒျေါလာ ကသြငျ့မယျလို့ဆိုပါတယျ..
Dell, Laptop, Tech News
Dell Laptop Tech News
ဖုန်းပြင်သူများ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Mobile Driver Part(1)
Nero9Essentials v9.4.12.3
5 မိနစ်အတွင်း 48% ထိ အမြန်အားသွင်းစနစ်ကို MWC တွင်...
ညစ်ညမ်းပုံတွေကိုကြော်ငြာထည့်ထားတဲ့ ဂိမ်းပေါင်း ၆၀ ...
Sony က 4K OLED နည်းပညာကို Smartphone မှာအသုံးပြုထု...
HUAWEI ရဲ့ ထုတ်ကုန်များကို အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့ မှာ...
SanDisk က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ 1TB USB-C Flash Drive
Microsoft က Surface Phone ကိုဖြန့်ချိဖို့ နီးကပ်နေ...
Intel Core CPU 8th Generation နဲ့ SSD 1TB အပါအဝင် ...